कलियुगका कुरा: एमालेको सहमति
एमालेभित्र बिबाद मिलाउन भोज श्रृखंला गर्ने सहमति भएछ। अस्ति सोल्टीमा युवा नेताले झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र के पी ओलीलाई भोज दिए। आज केपीले माधव र झलनाथलाई बालकोट घरैमा भोज दिदैंछन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा भोज दिने; अनि झलनाथले केपी र माध...वलाई घरमा भोज बोलाउने रे। नेपालीहरु नखाइकन त मिल्नै नसक्ने भए। (हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा....)
Tweets by @dipakbhattarai
सन् २००९ देखि २०१३ सम्म मैले लेख्ने फेसबुक स्टाटसको अन्त्यमा 'हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा... ' भनेर लेखिएको हुन्थ्यो। त्यही हास्नुपर्ने कारणलाई कोही कोही साथीले 'खुब मन पर्छ त्यसलाई एक ठाउँमा सग्रह गरेर राख् न' भनेर उचालेकाले त्यसलाई संकलन गर्न यो व्लग खोलेको हो। फेसबुकले स्टाटसमा निश्चित क्यारेक्टर मात्र राख्न दिने हुनाले (पहिलेको कुरा, अहिले त चेन्ज भइसक्यो) कतिपय लामा स्टाटस पनि यहाँ हुन्छन्। र, कहिलेकाँही मलाई लेख्न मन लाओ भने तीन हजार शब्द पनि लेखेको र त्यसलाई यहाँ थुपारेको उदाहरण छन्।
खासमा चाहिँ मेरा बाउआमाले राख्देको नाम दीपक भट्टराई हो। आफैं केही गरेर अरुलाई रोजगार दिने पाइन (खुबी) नभइन्जेल पत्रकारको काम गरिरहेको छु। अहिले बिबिसी मेडिया एक्सन म्यानमारमा सिरिज प्रोड्युसरको काम गर्छु। यस अगाडि २०१७ अक्टुबरसम्म बिबिसी मिडिया एक्सन नेपालले उत्पादन गर्ने साझा सवाल कार्यक्रमको सम्पादक थिएँ। तर मैले यहाँ राख्ने सामाग्रीमा म काम गर्ने संस्थाको कुनै साइनो छैन, 'गोरु बेचेको पनि।' यहाँ राखेका सामाग्री शुद्ध मेरा मनमा लागेका विशुद्ध कुरा हुन्।
सक्रिय पत्रकारिता गर्न थालेको २० वर्ष पुगेछ। स्पेसटाइम भन्ने दैनिक पत्रिकामा दुई वर्ष जति, कान्तिपुर टिभीमा ६ वर्ष जति, दैनिकी र नागरिकन्युज अनलाइनमा डेढ वर्ष जति काम गरेपछि सन् २००९ देखि अहिलेको संस्थामा जागिरे छु।
Dipak Bhattarai. Simple theme. Powered by Blogger.